Sacuudi Carabiya oo fashilisay Qaraxyo lala beegsan lahaa Xarumo Dowladeed. – Hornafrik Media Network
Saudi Arabia waxay xirtay dad dhowr ah oo la tuhunsan yahay inay isku diyaarinayaan Weeraro Ismaadaamin ah oo ay ka gaystaan Wasaaradooda Difaaca ee Riyad, siday soo warisay Wakaaladda Wararka Sucuudiga oo soo xiganaysa Saraakiil Amni.
Kooxdan la qabtay ayaa ka koobnaa 2 Qof oo Yamani ah, iyo 2 Qof oo Sucuudiyaan ah, kuwaasoo la rumaysan yahay inay la diyaarinayeen Yamaniyiinta Qaraxa, Waxaana howgal ay ka sameeyeen Ciidanka Ammaanka ee Sucuudigu Xaafadda Al-Ramal ee Riyadh ay gudaha u galeen goob ay raggan ku dhuumaalaysanayeen, iyadoo lala soo qabtay 2 Suumanka Qaraxyadda ah oo kiiba yahay 7 Kilogram, 9 Miinooyinka Guryaha lagu sameeyo, Mindiyo iyo Hub.
Ahmad Yasser Al-Kaldi iyo Ammar Ali Muhammad waxaa la rumaysan yahay inay ahaayeen 2-da Qof ee loo diyaariyay inay isku qarxiyaan Wasaaradda Difaaca ee Sucuudiga. Waxaana ay halkaasi ku qaadanayeen Tababaro la xiriira sida Suumanka loo xirto, habka loo qarxiyo, iyo Xeelado kale, balse waxay ka gaabsadeen Dowladda Sucuudigu inay shaaciyaan Labada Muwaadin ee Dalkeeda u dhashay oo lala qabtay raggan.